Ohatrinona ny vidin'ny tsindry fanerena? Ireo mpanamboatra tsindry Changzhou hanampy anao hahafantatra tsara!
Betsaka ny zavatra eo amin'ny fiainantsika izay mitaky fandrefesana ny tsindry, toy ny fampiharana simika, mekanika, hydraulic sy hydroelectric izay mitaky fanaraha-maso ny tsindry zareo amin'ny fotoana tena izy, saingy rehefa avo loatra ny lanjan'ny tsindry dia fitaovana fandrefesana tsotra d ...
Inona no maha samy hafa ny kasety vita amin'ny alimo vita amin'ny alim-baravarana sy ny kasety foil?
A. Inona no maha samy hafa ny kasety vita amin'ny alimo vita amin'ny alim-baravarana sy ny kasety foil? Taratasy vita amin'ny alimo vita amin'ny alim-baravarana vita amin'ny alimo, mampiasa dingana tsy manam-paharoa mandroso, ny ...
Kasety foil aluminium - ny kasety mazika izay afaka "manidina" mankany an-danitra
Gaga ny mpandeha vahiny iray nahita fa ny mpiasan'ny fikojakojana ny seranam-piaramanidina dia nanisy kasety ny motera alohan'ny niaingan'ny fiaramanidina. Nalaina sary ny sary ary navoaka tamin'ny Internet, nametraka ahiahy sy fanontaniana momba ny fiatraikan'ny fiarovana amin'ny fampiasana tape amin'ny fanamboarana airfram ...
Egret Tape, natsangana tamin'ny1997 tao an-tanànan'i Changzhou, faritanin'i Jiangsu, dia mirefy 13000 metatra toradroa, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana 20 000 metatra toradroa. Ny vokatra adhesive lehibe azonay dia azo zaraina ho sokajy roa lehibe. Ny voalohany dia andian-tsarimihetsika adhesive: aluminium foil tape, PE ...
Ny butyl rubber dia manana permeabilitantan'ny etona tena tsara sy fanoherana ny hafanana, ary be mpampiasa amin'ny famokarana vokatra vita amin'ny fingotra mahazaka hafanana, ny iray amin'ireo dia vokatra azo avy amin'ny spaonjy vita amin'ny spaonjy. Mpanamboatra fanodinana fantsona anaty maro no mahalala fa ny butyl anatiny ...
Raha resaka kasety foil vita amin'ny aliminioma dia mino aho fa tokony hahafantatra azy rehetra isika, satria matetika io dia hita ao amin'ny sokajy fitaovana ao an-trano. Voalohany indrindra, ny fantsom-bozaka vita amin'ny aliminioma dia vita amin'ny dity mora tohina amin'ny tsindry, miampy ny toetran'ny alimo foil ...
Inona ny kasety vita amin'ny foam?
Ny kasety vita amin'ny sombin-kazo dia ampiasaina amin'ny fanalefahana feo, insulate, gasketing, cushioning / padding ary ny famehezana ary natao hanatsarana ny endrika ivelany sy hanatsarana ny fahombiazan'ny famolavolana vokatrao. Ny kasety foam rehetra dia manana endrika tsy manam-paharoa sy tanjona kendrena. Ny sasany amin'ireo kasety ireo dia misy amin'ny karazana ...
Inona avy no ilain'ny kasety aluminium?
Voalohany indrindra, ny kasety vita amin'ny aliminioma dia vita amin'ny fametahana adin-tsaina avo lenta. Ho fanampin'izany, ny foil aluminium dia manana ny toetran'ny fanoherana ny hafanana avo lenta sy ny hafanan'ny rivotra, noho izany dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitehirizana hafanana sy toetra mampiharihary izay azo ampiharina amin'ny fiainantsika ...